Ahoana ny fomba hanakatonana ny tabilao Safari rehetra afa-tsy ilay miasa miaraka aminay | Avy amin'ny mac aho
Ahoana no hanakatonana ny kiheba Safari rehetra afa-tsy ilay miasa miaraka aminay
Amin'izao fotoana izao dia efa fantatrao angamba ity tendrony tsotra nefa mahomby ity hanidiana ny taban'ny Safari rehetra afa-tsy ilay iarahantsika miasa, fa na izany na tsy izany dia ho hitantsika ny fomba hanaovana azy io amin'ny fomba mora sy haingana. Fetsy kely io izay mety ho mora ampiasaina rehefa mampiasa kiheba vitsivitsy ao amin'ny tranokala Safari izahay ary na inona na inona antony tokony hanakatonantsika ireo takelaka rehetra afa-tsy ilay ampiasainay. Mazava ho azy fa ity dingana tsotra sy mora amin'ny fanidiana ny kiheba rehetra ity afa-tsy ny iray ihany no miasa rehefa manana takelaka maromaro misokatra amin'ny varavarankely tokana isika.
Amin'ity tranga ity dia tsy misy ny hitsin-dàlana fitendry ho an'ity fiasa ity fa raha tiantsika dia afaka mamorona iray tsotra isika. Na izany na tsy izany, mba hahitantsika an'io asa Safari io tsy maintsy ataontsika tsindrio ny File ao amin'ny menio fisotroana ary misokatra indray mandeha dia tsy maintsy ataontsika tsindrio ny bokotra alt. Ho hitantsika izao ny fomba safidy Close Tab lasa Close ny tab rehetra rehetra.
Amin'izany fomba izany raha miasa miaraka amin'ireo kiheba maro ao Safari isika ary vonona hivoaka ny solosaina ary tsy te-hanidy ny vakizoro mavitrika fa raha ny misokatra misokatra dia afaka manao azy. Azoko lazaina fa izaho manokana dia saika matetika mampiasa cmd + W hanidy ireo vakizoro misokatra ao anaty tranokala, saingy indraindray dia tsara ho ahy ny afaka manidy ireo takelaka rehetra afa-tsy ilay miasa mba hanamorana ny asako. Mazava ho azy raha iray amin'ireo izay manidy ny zava-drehetra indray mandeha isika dia afaka mampiasa cmd + Q fa amin'ity tranga ity dia tsy ny fanidiana ny zava-drehetra, raha tsy ny sisan'ny kiheba afa-tsy ilay nampiasainay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana no hanakatonana ny kiheba Safari rehetra afa-tsy ilay miasa miaraka aminay
MikelillOi dia hoy izy:
Alt + Cmd + W Io ny hitsin-dàlana fitendry
Mamaly an'i MikelillOi
Fernando Ledezma dia hoy izy:
Fa maninona no mihamangatsiaka ny varavarankelin'ny FaceBook rehefa mifindra amin'ny iray vaovao aho?
Valiny tamin'i Fernando Ledezma
Taorian'ny fampiasam-bolan'i Apple amin'ny Didi Chuxing dia mividy ny anjaran'i Uber any Shina ny orinasa
Inona no nitranga tany Apple nandritra ny tsy naha tany an'i Steve Jobs?